बच्चा र आमासँग के हुँदैछ भनेर गर्भावस्था विवरणको 38 38 हप्ता
उल्टो स्थिति हो जब बच्चालाई beepts 38 हप्तामा नराम्रो लाग्छ। धेरै पक्षहरूमा आन्दोलनहरूको तीव्रतामा कटौती गर्भाशयमा रहेको सर्तहरू, भ्रूण स्वभावका कमजोरीहरूसँग सम्बन्धित छ, तर कहिलेकाँही यो गम्भीर खतराको संकेत हुन सक्छ। यदि तपाईंले गर्भावस्थाको of 38 महिनामा थोरै चप्पल चिह्नित गर्नुभयो, वा बच्चाले एक प row ्क्तिमा -12-12 घण्टा चल्दैन भने तत्कालै अल्ट्रासाउन्डमा डाक्टरलाई। यस्तो चिन्हले हाइपोक्सिया वा गर्भावस्थाको कुनै पनि रोग विशेषज्ञहरूको परिणाम हुन सक्छ, जुन भ्रुण र आमाको फाइदाको लागि आपतकालीन वितरणको आवश्यकता पर्दछ।
IKETUS बाट इंडाटा (/ H2>
अक्सर गर्भवती महिलाहरू 38 38 हप्तामा पेटमा खेलिरहेका छन्। एकै समयमा, भ्रुणको लिक विभागहरू केहि मिनेट बीचमा छन्, एक घण्टा सम्म। यो चिन्ता गर्न लायक छैन भन्ने चिन्ताले भ्रुणको लागि एकदम सामान्य हुन्छ। यसले तेल पानी, प्रशिक्षण श्वासप्रश्वास र निल्न र निल्न र निगलने आन्दोलनहरू निल्छ। संस्करण मध्ये एक, pays 38 हप्ताको अवधिमा फलहरू चलिरहेको छ, हो, श्वासप्रश्वासको मागको प्रशिक्षण हो, डायाफ्राम र मांसपेशीहरू डुब्ने प्रक्रियामा कम हुन्छन्, जसले गर्दा वायु सास फेर्न सकिन्छ।
फ्लेटल डेडबिट हप्तामा: दर
अल्ट्रासाउन्ड डाटा र निरीक्षण अनुसार भ्रुणको स्थिति अनुमान गर्न यो यसको मुटुको धड्कन द्वारा निर्धारण गरिन्छ। भ्रुणलाई कम गर्ने आवृत्तिले अक्सिजनले आफ्नो अवस्था र रक्त संतृप्ति संतृप्ति प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस अवधिको सामान्य मान 1 140-1-1600 शटहरू हुनेछ, आन्दोलनहरूको आवृत्तिको बेला स्वदेशी बच्चाको सपनाको साथ - केही सुस्त हुन्छ।
Chp4s Chss chis chisches, हाईपोक्सको प्रतिक्रियामा, सर्वोच्च अवस्थाको संक्षेप बढाउँदछ, लामो अवस्थाको साथ, संक्षिप्त रूपमा। यो याद गर्नुपर्दछ कि अक्सिजन अभावको कारणहरू पहिचान गर्न र हटाउनुहोस्।
जब गर्भावस्था यसको तार्किक निष्कर्षमा सर्छ, आमाबाबुलाई उज्यालो हेराईमा पर्खिरहेका छन्। 37 37 हप्ता पछि, यो स्वाभाविक हो। बच्चा र उसको आमा यस्तो महत्त्वपूर्ण घटनाको लागि तयार छन्।
तपाईको गर्भावस्थाको अवधि 38 38 हप्ता हो। बच्चाको वजन लगभग 000000--00 ग्रामहरू तौल हुन्छ, यसले दिनको 2-3--300 ग्राम थप गर्दछ। मुकुटबाट फलको आकार (बसाउने) करीव cm 35 सेन्टीमिटर छ, लम्बाई पूर्ण रूपमा 47 47--49 सेमी हो।
राम्रो दुर्लभ अनुभवहीन बच्चा जन्माईको अन्त्यमा पछिल्लो मिति देखि with0 हप्ताको अन्त्यमा सही रूपमा हुन्छ। दोहोरिएका आमाहरूको, यो केवल %% मा हुन्छ। यो तथ्यको कारणले हो कि चक्रको आवृत्तिको, र सबै गर्भवती महिलाहरूमा निषेचन मिति फरक हुन्छ। भ्रुणको परिपक्वता र प्लेसेन्टा बुढेसकालको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।
प्लस-माइनस 1 हप्ता - दर सूचक, त्यसैले यो सम्भवतः यो बच्चाको साथ तपाईंको बैठक चाँडै हुनेछ!
र यदि यो पहिले नै बधाई छ भने, हामी इमान्दारसाथ बधाई दियौं र हाम्रो न्यूजलेटरसँग सदस्यता लिइरहेका छौं ", हामी तपाईंलाई पत्राचारको रूपमा समान उपयोगी सहयोगीको लागि हुनेछौं" हप्तादेखि गर्भावस्था "। मेलिंग सूचीको बारेमा अधिक पढ्नुहोस् "बच्चाको जीवनको पहिलो वर्ष" र तपाईं यसको सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ।
बच्चा गर्भावस्था हप्तामा फल के देखिन्छन्?
तपाईंको कचौरा अविश्वसनीय प्यारा छ, तर अझै असुरक्षित देखिन्छ, त्यसैले यो हामीलाई लुकाउन सकिन्छ कि यो एक सानो छाता अन्तर्गत लुकाउन सकिन्छ।
बच्चाले तौल बढाउन जारी राख्छ, र देखा पर्न तयारी गर्दैछ। यदि उहाँ यस हप्ताको जन्म भएको छ भने, यो हुनु पर्छ, पहिलो ठूलो पुकार प्रकाशित गर्दछ, र यसको फोक्डहरू हराउनेछ, स्वतन्त्र सासका लागि तयार हुनेछ। केहि बच्चाहरू, जन्म, कराउँदैनन्, र एक विशेषता "मउ" प्रकाशित नगर्नुहोस्। यसले साना आमाहरूलाई धेरै डराउँछ, तर त्यहाँ कुनै dectibel shouts छैन, तर इनडेल गर्न सक्ने उहाँको क्षमता।
कहिले काँही "strage लालचक" मा, रिपोर्टरकर्मीहरूले थोरैलाई गधाको बच्चाको जन्म गरेपछि, नेनोटिजस्ताहरू चिकित्सकहरूले ध्यानपूर्वक जाँच गर्छन्। जसको कागजातहरू "प्राप्त अंकहरू" रेकर्ड गरियो।
प्रति दिन 300--35 ग्राम समायोजन गर्नु तपाईंको बच्चा आमाको शरीर बाहिर जीवनको लागि तयारी गरिन्छ। यसको तौल 30000--31500 ग्राम पुग्यो, वृद्धि 49 pentent सेन्टिमिटरहरू आइपुगेको छ। शरीरमा प्राथमिक लुब्रिक्सिनको स number ्ख्या कम भयो, लनो (गन कपाल भग्नावशेषले भजनको शीत) लगभग पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा हुन्छ। बच्चाको नोगोट यति धेरै भयो कि तिनीहरू औंलाहरूमा पुग्छन्। कहिलेकाँही बच्चाले तीव्र न nails हरूको साथ आफ्नै शरीरको स्क्रिप्ट गर्न सक्दछ, त्यसैले तपाईंले आफ्नो अनुहार वा पेटमा सानो खरोंच देख्नुभयो भने छक्क नपाओस्।
बच्चाको तल्लो विभागमा, धेरै आजीविका फोहोर जम्मा भएको छ। इन्ट्रान्टरन विकासको समयमा, बच्चाले खाद्यान्न छालाको सामानहरू निल्नलाई खारेज गर्न धेरै पटक, यसमा समावेश भएको खाना छालाको कोषहरू निल्दछन्, फ्युश कपाल र पुराना आन्द्राको कणहरूको टुक्राहरू। पेटमा प्रशोधन गरिएको कम्पोनेन्टहरू आन्द्रामा प्रवेश गर्छन् र त्यहाँ मेक्सियाको रूपमा जन्ममा बस्छन्। कहिलेकाँही मूल शुल्कले जन्मको अघि भ्रुणको जीव छोड्छ। यस अवस्थामा, बच्चा हरियो-कालो बलगमसँग कभर भएको प्रकाशमा देखा पर्दछ।
<< p> गर्भावस्थाको of 38 महिनामा जन्मेको बच्चालाई डराउनु पहिले नै मानिन्छ। केटीहरू, एक फिगेटिजेको, अधिक अक्सर प्रकाशमा देखा पर्न र आफ्नो उपस्थिति हप्तामा 38 38 मा कृपया। केटाहरू प्राय: एक अवधिको लागि जन्मन्छन् वा एक हप्ताको लागि आमाको पेटमा ढिलाइ पनि हुन्छन्। तर कसैलाई अपेक्षित हुनेछ, प्रसूति अस्पतालमा जम्मा हुनु पर्छ, र कार्ड सँधै महिलासँग अवस्थित छ।
कुर्सीको प्रकाश भनेको बच्चा जन्माउने अर्को विशेषता प्रेसर हो। दिउँसो एक दिन 2- partimes पटक देखा पर्न सक्छ, ती महिलाले गाडीको मोटाईमा कमी देखाउँछिन्। यो घटना एस्ट्रोजेन को संख्या मा वृद्धि को कारण छ र शरीरबाट अधिक पानी हटाउने को रूप मा छ। बच्चा जन्माउनु भन्दा पहिले शारीरिक शिपहरूको सहभागिता खाना विषाक्तताका लक्षणहरूबाट भिन्न हुनुपर्दछ।
सामान्य प्रक्रियाको सुरूवात अघि, गर्भाशयको तल हटाइन्छ। फलहरू ग्रुट गरियो र गर्भाशयको तल्लो भागमा प्रीट्स (सामान्यतया हेड) प्रेस गर्दछ, यसलाई तल झार्दै। यस प्रक्रियाको परिणाम स्वरूप पेटको दबाव, कलेजो र फोक्सो घट्छ, महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा सास फेर्ने अवसर दिन्छ, पेटमा गुरुत्वको भावना हुन्छ। Gastriainstinal पर्चा को शीर्ष विभाग को अंग विभाग को अंगहरु फेरि एक शान्तिीय स्थिति प्राप्त। एकै साथ मूत्राशयको दबाव र मलाशय बढ्छ।
दुबै हातमा रक्तचापको मापन;
भ्रुणको स्थिति र आकारको अनुमान छ।
बच्चाको मुटुको मुटु सुन्न / LI> :
गर्भावोको 38 38 हप्ता गर्भावस्था भयो। यस अवधिमा बच्चाको अनुमानित वजन 3000--3100 ग्राम, वृद्धि हो - 49 cm 49 CM सम्ममा छ कि तपाईंले आफ्नो बच्चासँग भेट्नु भएको छ। यदि बच्चाको जन्म अझै अगाडि छ - हतोत्साहित नहुनुहोस्, तिनीहरू छिट्टै नै हुनेछन्। Dechnest 38 गर्भावस्थाको - हप्ताको - कुन महिना हो? यो लगभग नौ क्यालेन्डर महिना हो।
के बच्चा गर्भावस्था हप्ताको समयमा जस्तो देखिन्छ
हास्यास्पद बच्चाको टाउकोको टाउको। Subcutey Adipipishy ऊतक को गठन छ, छाला एक सुन्दर गुलाबी छाया प्राप्त भएको छ। केहि स्थानहरूमा यो अझै पनि फ्ल्याश कपाल संग कभर गरिएको छ, वा लनो। धेरै चाँडै तिनीहरू हराउनेछन्। कच्चा लुब्रिक्सेन्ट केवल पट्टि मात्र सुरक्षित गरिन्छ।
बच्चाको नर्गेरको ननट कडा र नेल अफको किनारमा पुग्न। कान शेलहरू लोचदार, थोरै आशा र एक विशिष्ट स्थान ओगटेको छ। औंलाहरूको हिल र तकियाहरूमा, विशेषता विनियोजन गठन गरियो।
जननाल्टीहरूले आफ्नो गठन पूरा गरे। केटीहरूमा, भुइँ अंतरहरू बन्द छ, सानो यौन ओठहरू ठूलोले ढाकिएको छ। केटाहरूसँग Semenniks छ अण्डकोषमा खस्कियो। डुप्लीडेटेड बच्चाहरूको करीव 1%, प्रसवहरू बच्चा जन्माए पछि स्क्रोटममा खस्छ।
मांसपेशीहरू - फ्लेक्सर क्रम्ब्सहरू शारीरिक हाइपेनसनमा छन्, त्यहाँ धेरै स्क्रिप्टहरू छन् - कान्छो - चुम्बन र निल्न। तिनीहरूलाई धन्यवाद, बच्चाले स्वतन्त्र रूपमा खान सक्छ।
<< p> 38 हप्ताहरूमा, संचयी संरचनामा परिवर्तनहरू ध्यान आकर्षण गर्न योग्य छ। प्लेसेसा पहिले जस्तो छैन। अब यो सक्रिय रूपमा सहमत हुन्छ - एफेम भाँडाहरू संलग्न छन्, र सहरमा सिस्टनहरू गठन हुन्छन्, क्याल्सियम जम्मा गरिन्छ। अपर्याप्त पोषण पोषकहरू एक भ्रुण बृद्धि ढिलाइको साथ छ। लगभग सबै पोषक तत्वहरू अब महत्त्वपूर्ण गतिविधि सुनिश्चित गर्न उद्देश्य हुनेछ, र फ्याट मास राख्नु हुँदैन।
<< p> जब डाक्टरहरूले गर्भावस्थाको th 38 औं ओबस्टिक हप्ताको बारेमा कुरा गर्छन्, यसको मतलब भनेको गर्भधारणबाट आएका हुन्, जुन ठीक9महिना हो। तपाईंको बच्चा लगभग kg किलोग्राम हानी हुन्छ र यसको वृद्धि 48 48-0500 सेन्टीमिटरमा पुग्छ। बच्चा एकदम जन्मको लागि बिल्कुल तयार छ।
जब डाक्टरहरूले गर्भावस्थाको about 38 औं ओबस्ट्रन्ट युगको बारेमा कुरा गर्छन्, यसको मतलब भनेको गर्भधारणबाट बितिसकेको छ, त्यो हो, गणना गर्ने समय र गणना गर्ने विधिहरू)।
हप्तामा कसरी फलस्वरूप हुन्छ
तपाईंको बच्चा मातृभाको गर्भरको जीवनको लागि पूर्ण रूपमा तयार छ। यससँग कुनै आधारभूत परिवर्तनहरू छैनन्। कोरोच केवल वजन बढाउन र लम्बाईमा तानेर जारी छ। र उनको सानो शरीरमा, काम सबै प्रणाली र अंगहरूको कार्यको पूर्णतामा ल्याउन काम गर्दैछ।
एक प्लेसेन्टा जसले भ्रुणलाई खाना प्रदान गर्दछ, बुढेसकाल र पातलो हुन्छ। बच्चाले प्राप्त गरेको पोषक तत्वहरूको मात्रा घटाउँदै वजन बढाउने प्रक्रियाको ब्रेकिंग गर्दछ। अब बच्चाको द्रव्यमान थोरै बढ्छ, किनकि सबै उपयोगी पदार्थहरूको थोक यसको आजीविकामा खर्च गरिन्छ। 120 - 1 160 बीट प्रति मिनेट 120 - 1 160 बीटहरूको अवधिको साथ एउटा सानो मुटुको धडकन।